RGN-HKG Relief Flight for February
𝐘𝐀𝐍𝐆𝐎𝐍 - 𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐊𝐎𝐍𝐆 - 𝐘𝐀𝐍𝐆𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐋𝐈𝐄𝐅 𝐅𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐍 𝟏𝟕 𝐅𝐄𝐁𝐑𝐔𝐀𝐑𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟏
မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း (MNA) မှ ဟောင်ကောင်မြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇) ရက်နေ့ တွင် နေရပ်သို့ပြန်မည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ နှင့် ဟောင်ကောင်မြို့သို့သွားရောက်မည့်ခရီးသည်များ အတွက် Relief Flight ခရီးစဉ်အားပျံသန်းပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန် - ဟောင်ကောင် 08:50 13:30
(UB - 8029 )
ဟောင်ကောင် - ရန်ကုန် 15:00 16:45
(UB - 8030)
ရန်ကုန် - ဟောင်ကောင် ကယ်ဆယ်ရေး ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါမည့်ခရီးသည်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ စုံလင်စွာရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို MNA Call Center +951 378603 – 04 – 06 – 07 – 08 | +951 377840 – 41 – 42 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဟောင်ကောင် - ရန်ကုန် ကယ်ဆယ်ရေး ခရီးစဉ်သည် ဟောင်ကောင်မြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး မှ ထုတ်ပြန်ထားသော ခရီးသည်စာရင်း အတိုင်းပျံသန်းပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်မေးမြန်းမှုများအား +852 5573 6793, +852 2861 1811 နှင့် consularmcghk@gmail.com, deksrsvn@deksair.com.hk သို့ဆက်သွယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Myanmar National Airlines (MNA) will operate Yangon – Hong Kong - Yangon Relief Flight on 17 February 2021
Yangon – Hong Kong 08:50 13:30
Hong Kong – Yangon 15:00 16:45
Passengers who are traveling from Yangon to Hong Kong with the relief flight must have the necessary documents to enter the respective country. For detailed information, please contact MNA Call Center +951 378603 – 04 – 06 – 07 – 08 | +951 377840 – 41 – 42.
Hong Kong – Yangon relief flight will be operated for passengers listed by Myanmar Consulate-General, Hong Kong SAR and Macau SAR. For detailed information, please contact +852 5573 6793, +852 2861 1811, consularmcghk@gmail.com, deksrsvn@deksair.com.hk